Dr. Li Deyi avy amin'ny Chinese Academy Engineering dia nidera fatratra ny vokatra radar an'i Nanoradar-News-Hunan Nanoradar Science & amp; Technology Co., Ltd.,
Fotoana: 2016-09-07 Hits: 21
Tamin'ny tolakandron'ny faha-6 sept., Tao amin'ny ivon-toeran'ny rafitry ny rafitra fanaraha-maso manan-tsaina tamin'ny taona 2016 tany KTT (China) fananganana tobim-pianarana akademia miaraka amin'i Dr. Li Deyi avy amin'ny Injeniera Akademia Sinoa sy Akademia Iraisampirenena ho an'i Eropa sy Azia, ary nampiarahany amin'ny Dr Li hanatevin-daharana ny tobin'ny Akademia Novasky.
Araka ny fifanarahana, ny roa tonta dia hampiditra sensor ho an'ny fiara, hitondra ny teknolojia fiara mifono saina ary mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fiara sy ny motera misy kodiarana.
Lanonana fanaovan-tsonia fanaovan-tsonia fiaraha-miasa eo amin'i Novasky sy Dr. Li Deyi
Tamin'ny 7 sept., Nitsidika an'i Nanoradar i Dr. Li sy ireo manam-pahaizana manokana. Dr. Li dia nidera fatratra ny zava-bitan'i Nanoradar tamin'ny teknolojia radar microwave, ary nanamafy tanteraka ihany koa ny fivoaran'ny indostrian'ny vokatra mmw radar.
Andriamatoa Zhou Kunming, mpitantana jeneralin'i Nanoradar, dia mampiditra ireo vokatra mmw radars amin'i Dr. Li Deyi
Hunan Nanoradar Technology Co., Ltd dia manampahaizana manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana sensor mmw radar. Ny vokatra dia misy 24 GHz, 60 Ghz Ary 77 Ghz, izay ampiharina indrindra amin'ny fiarovana ny fiara, ny fiara mandeha ho azy, ny fisorohana ny sakana ary ny altimeter ho an'ny UAV, ny fiarovana avo lenta, ny fifamoivoizana an-tsaina, ny jiro manan-tsaina ary ny fampiharana indostrialy hafa.
PREV: Fifanakalozana fifanakalozana ara-teknika momba ny mpanamory fiaramanidina fiara sy serivisy fampahalalana miaraka amin'ny TiAA any Etazonia
MANARAKA : Welcome representatives from BCG & LG to visit Nanoradar